RAILA ODINGA OO KU BAAQAY IN LAA TAAGEERO DAWLADA SHARMAARKE EE SOMALIA (DAAWO VEDIO) | Toggaherer's Weblog
XISBIGA UCID OO WARSAXAAFADEEED KA SOO SAARAY ARINTA LABA XUBNOD EE COMISIONKA.
Raysal wasaaraha dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Nairobi, hogaamiyaha xukuumada Kenya ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay gacan siiyaan dowlada Soomaaliya.
Mr.Odinga ayaa ka hadlay xaalada amni ee dalka Soomaaliya, asagoo sheegay in ay lama huraan tahay in wadamada jaarka la ah Soomaaliya inay gacan siiyaan Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Mr.Odinga ayaa sheegay in aysan rabin inay faro geliyaan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya, hase yeeshee amniga gobalka geeska afrika uu ku xiran yahay xaalada amni ee dalka Soomaaliya.
“ma ogolaan karno in magaalada Muqdisho u gacan gasho kooxaha mayilka adag ee xag jirka ah oo ay burburiyaan dowlada sharciga ah ee Soomaaliya….” Ayuu yiri Raysal wasaaraha Kenya Odinga oo saxaafadda ugu waramayey xafiiskiisa Nairobi.
Raysal wasaaraha Kenya ayaa sheegay in dowlada Kenya ay gacan siin doonto dowlada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in xiriiro kala gedisan oo uu la sameeyey beesha caalamka uu baaqay in la dadajiyo dhaqaalihii horey loogu balan qaaday in gacan lagu siiyo dowlada Soomaaliya.
“amniga Soomaaliya si toos ah ayuu noo saameenayaa….dalka Kenya waxaa kusoo qul qulaya qaxooti tiro badan…” ayuu yiri Raile Odinga oo xiligii uu shirka jaraa’iid bixinayey uu garab taagnaa Raysal wasaaraha Soomaaliya, Dr.Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
Raysal wasaaraha Kenya oo ay saxaafada weydiisay in Xukuumadiisa ay ciidamo u diri doonto gudaha Soomaaliya ayaa ku jawaabay “…. Aniga hada oron maayo ciidamo ayaan direynaa qorshahaas waa mid weli aan ka baaraan degayno….wixii go’aan ah oo aan ka gaarnana gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa…” ayuu ku jawaabay Odinga oo ka hadlay tilaabada ay dowlada Kenya qaadi doonto.
Odinga ayaa diiday inuu u jawaabo kooxda Al shabaab oo dhawaan ku hanjabtay inay weeraro ka fulin doonaan dalka Kenya hadii ay dowladaasi faraha lasoo gasho arrimaha Soomaaliya.
“…..anagu kalama hadalno arrimaha siyaasada Soomaaliya iyo qaxootiga Soomaalida, kooxda al shabaab…..” ayuu jawaabtiisa kusoo koobay Odinga.
Dowlada Kenya ayaa sheegtay in kooxaha ka dagaalama gudaha Soomaaliya ay xiriiro la leeyihiin kooxda Al Qaida oo horey weeraro uga fulisay gudaha dalka Kenya, ayadoo xukuumada Kenya sheegtay in amnigooda uu ku xiran yahay sidii dalka Soomaaliya uusan saldhig ugu noqon kooxaha ay ku tuhunsan yihiin